နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသ ExpertOption | ခန့်မှန်းချက်အနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပျရှားမှု - က ISO
သင်တစ်ဦးရွေးချယ်စရာကုန်သည်အဖြစ်ရှိရမည်အရှိဆုံးအရေးပါကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်များနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ဂရပ်ဖတျရှုနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ExpertOption ပလက်ဖောင်းအတော်များများနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ဒီပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဒီလမ်းညွှန်ကိုသင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အခြေခံသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ ExpertOption ကုန်သွယ် platform ပေါ်တွင်ထောက်ပံ့ပေးဇယားအမျိုးအစားများ
ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောငွေပေးငွေယူ၏ကာလကိုနားလည်ပါသလဲ?
Trendlines, ထောက်ပံ့ရေးနှင့် Resistance
မိကျောင်း / မိကျောင်း Indicator
မိကျောင်းကိုပိတ်လိုက် / အိပ်ပျော်နေတဲ့
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအနာဂတ်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ယခင်နှင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းအချက်ပြမှုများကိုလျှောက်ထားပါဝငျသညျ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, သင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနီးပါးဆင်တူဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဤအသိပညာနှင့်အတူ, သငျသညျအနာဂတျမှာခေတ်ရေစီးကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အနေအထားအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါခေတ်ရေစီးကြောင်းအမြဲတမ်းဂရပ်ပေါ်မည့်အကြောင်းအားတက်သရောပြောခဲ့သည်နေကြသည်။ ဒီဂရပ်တွင်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးဟာပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆိုပါအလျားလိုက်ဝင်ရိုးအချိန်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါဟာအတိတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အချိန်ပြန်လည်ရွေ့လျား, လက်ဝဲမှလက်ျာဘက်ပုံပြမျဉ်းဆွဲယူဖို့ထို့ကြောင့်လွယ်ကူပါတယ်။
အချိန်ပြန်ရွှေ့သင်သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြန်လုပ်ပါလေ့သည်ဟုခေတ်ရေစီးကြောင်းဆိုတာတွေ့ရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်စျေးကွက်တိုင်းအင်္ဂါနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွင့်လှစ်အပြီးစျေးနှုန်းတစ်ခု uptrend တစ်နာရီချမှတ်ကြောင်းသတိထားမိပေလိမ့်မည်။ စျေးကွက်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ဤအချက်အလက်နှင့်အတူ, သငျသညျတစ်နာရီပတ်ပတ်လည်တိုင်းအင်္ဂါနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အမြတ်အစွန်းဝယ်ရာထူးသို့ဝငျနိုငျသညျ။
အဆိုပါဂရပ်အပေါ်စျေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဇယား၏ပုံစံကိုပြသထားပါသည်။ ExpertOption အများအပြားဇယားသည်။ သုံးယောက်အခြေခံသူတွေကိုကိုကြည့်ကြရအောင်။
ဒါဟာအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံတဲ့တစ်ခုတည်းသောလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်ဆီသို့ဦးတည်သင့် screen ၏ဘယ်ဘက်ကနေလိုင်းဂရပ်ရွေ့လျား။ အောက်တွင်ပုံမှန်လိုင်းဂရပ်၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားငွေပေးငွေယူဘားဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘားအချက်အလက်များ၏သုံးမျိုးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမပိုင်ဆိုင်မှု၏အဖွင့်သောစျေးနှုန်း, အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးစျေးနှုန်းကုန်သွယ် session တစ်ခုအတွင်းမှာရောင်းချသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်, ထိုပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိတ်ပွဲစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်ပုံမှန်ဘားဂရပ်၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မီးခုံဇယား ဘားဇယားအဖြစ်အလားတူသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန်။ သို့သော်သူတို့ဖတ်ရှုဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မီးခုံဖြစ်စေအဆုံးအပေါ်နှစ်ခုမီးခွက်နဲ့စတုဂံဘားပါဝင်ပါသည်။ အောက်တွင်ခုံဇယား၏ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကုန်သွယ်မှု entry ကိုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်များအကြားအချိန်ကိုခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါက်မှာပိတ်စျေးနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်ကုန်သွယ်ရေးမှာ entry ကိုဖွင့်လှစ်သောစျေးနှုန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးငွေပေးငွေယူ၏ကာလတစ်လမှတစ်မိနစ်မှတစုံတခုရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ် ExpertOption ပလက်ဖောင်းတွင်, သင်အလွယ်တကူငွေပေးငွေယူ၏ကာလပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နာရီပေါင်းများစွာကျော်ပေါ်ပေါက်ကြောင်းရှည်ရှည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသွားပါ။ သငျသညျစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုနောက်ပြန်ဆုတ်မတိုင်မီန်းကျင် 1.5 မိနစ်ဖွင့်လှုံ့ဆျောတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်သတိထားမိသင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းပြောပါ။ သင်က uptrend စတင်အဖြစ်ဝယ်အားမရခြင်းနှင့်, 1 မိနစ်နှင့် 1.5 မိနစ်အကြား၏ငွေပေးငွေယူတဲ့ကာလ setting အားဖြင့်ဤအချက်အလက်ကနေအကျိုးမပေးနိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းကိုသင်လမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ရှေ့တော်၌ထိုကုန်သွယ်ရေး exit ရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင်ထပ်တလဲလဲစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုပုံစံများကိုသိရှိနိုင်ဖို့သမိုင်းဆိုင်ရာဇယားကိုလေ့လာတဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းဤထပ်တလဲလဲပုံစံများကိုသုံးနိုင်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေတဲ့အခါ, သတိရဖို့သုံးအရေးကြီးသောအချက်များရှိပါသည်:
စျေးအတက်အကျတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကအမြဲဖွင့်သို့မဟုတ်ဆင်းဖြစ်စေရွှေ့မည်။ စျေးနှုန်းအနေနဲ့အထက်သို့သို့မဟုတ်အောက်ဖက်ဦးတည်ပြောင်းလဲစတင်လိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်သင်သာတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ဖော်ထုတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစျေးနှုန်းကြောင့်နောက်ကြောင်းပြန်သည်အထိကြောင့်ဦးတည်ချက်အတွက်ရွေ့လျားဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျး မှလွဲ. တဦးတည်းဦးတည်ရွေ့လျားစတင်သည်လျှင်။
သမိုင်းကိုယ်နှိုက်က repeat ။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ယခင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ဒေတာလေ့လာနေအရေးကြီးသောသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုထပ်တလဲလဲပုံစံများပြပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်, ကသူတို့ထံမှကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့။ မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါဤနည်းဥပဒေအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျစျေးကွက်မတည်ငြိမ်သောအခါဖွံ့ဖြိုးကြောင်းထပ်တလဲလဲခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်လျှင်, သင်အလွယ်တကူအများဆုံးကုန်သည်များပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမယ်လို့ရှိရာအမြတ်အစွန်းအရောင်းအစေနိုင်သည်။
တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းအများအပြားနောက်ခံအကြောင်းအချက်များကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, နိုင်ငံရေးလူမှုစီးပွားရေးနှင့်သဘာအချက်များပါဝင်သည်။ ဒါဟာသင်အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါ, အရာမဆိုအကြောင်းအချက်များနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးနေဖို့ သို့ဖြစ်. အရေးကြီးပါတယ်။
သငျသညျအနာဂတျမှာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အခြေခံကိုနားလည်ခြင်းသင်တစ်ဦးအားသာချက်ကိုပေးတော်မူ၏။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှရရှိခဲ့သတင်းအချက်အလက်များအဆက်မပြတ်မသက်ဆိုင်စျေးကွက်အခြေအနေများ၏အမြတ်အစွန်းအောင်နှငျ့သငျပွင့်လင်းအနေအထားအခါတိုင်းဆုံးရှုံးမှုခံစားနေရပြီးအကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်သည်သင်တိကျစွာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းကြောင့်အရောင်းအဝင်နှင့်အထွက်အကောင်းဆုံးင်သည့်အခါဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဤအသိပညာအပေါ်တည်ဆောက်ထားသကဲ့သို့, သင်ယခုသင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်တိုးတက်လာဖို့ပိုမိုခေတ်မီစျေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမော်ဒယ်များချမှတ်နှင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့သိပ္ပံနှင့်အနုပညာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပညာလေ့လာဆည်းပူးခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံသင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုဖွင့်အခါတိုင်းအောင်သင့်ရဲ့အလေးသာတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုပါဝငျသညျ။
အဆိုပါ ExpertOption ပလက်ဖောင်းအပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လမ်းညွှန်ကနေ, သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသမိုင်းဆိုင်ရာဈေးကွက်ဒေတာလေ့လာနေကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဝယ်ယူအဆိုပါဒေတာထို့နောက်အနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအတိအကျ
သင်သည်သင်၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဂရပ်များနှင့်ဇယားကနေဒီဒေတာကို extract သလဲ?
နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလမ်းညွှန်ထဲမှာ, သင်စျေးနှုန်းအတက်အကျတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုသော်လည်းကောင်းတစ်ဦးအထက်သို့သို့မဟုတ်အောက်ဖက်ဦးတည်ချက်အတိုင်းလိုက်နာကြောင်းသိရှိခဲ့၏။ ဤသည်တသမတ်တည်းအထက်သို့သို့မဟုတ်အောက်ဖက်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ဟုခေါ်သည်။
အထက်ပါပုံရိပ်ကနေ, သင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုအထက်သို့ဦးတည်ချက်ယူကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်သေးငယ်လမ်းကြောင်းသစ်ပြောင်းပြန် (ရှည်လျားသောအပြာဖယောင်းတိုင်) ကနောက်တော်သို့လိုက် (တာရှည်အဖြူဖယောင်းတိုင်များကသက်သေပြ) ကြိုကြားကြိုကြားကြီးမားတဲ့စျေးနှုန်းတိုးပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်အလုံးစုံ, စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအထက်သို့ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပတ်အတွင်းမှစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာရှည်အရာက Short သက်တမ်းခေတ်ရေစီးကြောင်း
တဦးတည်း session တစ်ခုအတွက်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကြောင့်နောက်ကြွလာသော session တစ်ခုအတွက်နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုထက်နိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိ Uptrends ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
တစ်ဦးကုန်သွယ် session ရဲ့အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းယခင်ကုန်သွယ် session ရဲ့အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းထက်မြင့်မားသည်အဘယ်မှာရှိ Bearish လမ်းကြောင်းသစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကုန်သွယ် session တစ်ခုအတွက်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းရှေ့ session ရဲ့နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုထက်နိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိဘက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတဦးတည်းသီးခြားဦးတည်ချက်မယူပါဘူးဘယ်မှာ flat သို့မဟုတ်အလျားလိုက်လမ်းကြောင်းသစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီးစျေးနှုန်းများထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတူရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်တိုတောင်းသောကာလတိုလမ်းကြောင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ ဤရွေ့ကားပုံမှန်အားဖြင့် 30 မိနစ်ထက်မပိုသောကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးကြောင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်၊ မိနစ် ၆၀ မှ ၁၂၀ မိနစ်ကြားကာလကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်သင်၏နည်းပညာဆန်းစစ်မှုကိုစတင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ ထို့နောက်၎င်းနောက်မိနစ်အနည်းငယ်မှမိနစ် ၃၀ အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမည့်ပိုမိုတိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေပါ။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်ဆုံးမှာ reverse ပါလိမ့်မယ်။ သို့ဖြစ်. ညာဘက်ယခုအချိန်တွင်အနေအထားဝင် / ဒီမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်နှင့်ထွက်ပေါက်မျှော်လင့်နိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။
ဒါဟာ trendline တလျှောက်နှစ်ခုအရေးကြီးသောစျေးနှုန်းအချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါဝငျသညျ။ ဤထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါထောက်ခံမှုတစ်ဦးကုန်သွယ် session တစ်ခုအတွင်းမှာအဘို့သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအညွှန်နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစျေးနှုန်းတာမျိုးပြီးတာနဲ့
တစ်ဘက်တွင်အပေါ်ထောက်ခံမှုလိုင်းကထွက်အဆင့်နှင့် reverse ရန်အလွန်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆိုပါခုခံနေတဲ့ကုန်သွယ် session တစ်ခုအတွင်းမှာအဘို့အမြင့်ဆုံးသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး uptrend စဉ်အတွင်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုသူတို့ကခုခံလိုင်းထိမှန်တဲ့အခါမှာ reverse မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
ဆီမီးခုံဂရပ်နှင့်အတူစတင်ပါ။ ဒီအကြောင်းပြချက်မီးခွက်သူတို့ရဲ့ချွန်မီးခွက်မှတဆင့်သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် session တစ်ခုမှာအတိအကျကိုမြင့်အနိမ့်စျေးနှုန်းများကိုပြသပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
သင့်ရဲ့လိုင်းဆွဲ tool ကိုသုံးပြီးဇယားတစ်လျှောက်တွင်နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုမှတ်ဆက်သွယ်ထားသောတစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ။ အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှတ်အတူတူလုပ်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးလိုင်းများအချင်းချင်းအပြိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
သငျသညျကလမ်းကြောင်းသစ်တစ်လျှောက်လုံးကိုအမြင့်ဆုံး / အနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှတ်ကိုထိမှတစ်ခုချင်းစီကိုလိုင်းအဘို့မဖြစ်နိုင်ပါရဲ့မသင့်ပါတယ်။ သင်သည်အဘယ်သို့ချင်သောအမြင့်ဆုံးသော / အနိမ့်သောစျေးနှုန်းအချက်များမလွယ်ပါဘူးနှစ်ခုအပြိုင်လိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့နှစ်ခုအပြိုင်လိုင်းများအကြား space ကိုတူးမြောင်းဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းသွေဖီ၏အကြောင်းကို 95% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အကြောင်း, တူးမြောင်းရဲ့ width ကကိုယ်စားပြုပျမ်းမျှစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တူးမြောင်းရဲ့ width 1.3656 သည်နှင့်သင် $ 2.477 မှာဝယ်ထားပါလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏သပိတ်စျေးနှုန်း 3.8426 ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။
အခြားသောနည်းလမ်းပိုင်ဆိုင်မှုအတိတ်အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးစျေးနှုန်းများမှာရှာဖွေနေပါဝငျသညျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုယ်နှိုက်ကကို repeat '' စည်းမျဉ်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အနာဂတ်စျေးနှုန်းများသည်ဤစျေးနှုန်းအချက်များကိုကျော်လွန်လိမ့်မည်ဟုအလွန်မဖြစ်နိုင်ပါပဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်သည်လည်းပတ်ပတ်လည် '' ပိုက်ဆံ၏နိယာမသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအနိမ့်လှည့်လည်တန်ဖိုးကိုမှာအားမရ $ 16,500 နှင့် $ 16,000 မှာသင့်ရဲ့ခုခံရေးထားပါရန် option ကိုအကြံပြုလိုတယ်ရှိပါကဆိုလိုသတည်း။ ထို့နောက် $ 17,000 မှာသင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုထားပါ။
ဒီလမ်းညွှန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်ဖို့ဘယ်လို သိ. တစ်ခုဖြစ်လာဆီသို့ဦးတည်မယ့်တဦးတည်းခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့သူကသငျသညျဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့ပါသည် expert options ကိုကုန်သည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလျှောက်ထားရန်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကန့်သတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးသတင်းအချက်အလက်များသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိရပေမည်။
ဒီအညွှန်ပြချက်ဘီလ် Williams က, စာအုပ် Chaos သီအိုရီတစ်ခုအောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်စာရေးဆရာများကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအညွှန်ပြချက်ကြောင့်ပြီးနောက်အမည်ရှိရဲ့တိရစ္ဆာန်၏အမူအကျင့်ကိုဆင့်ပွားဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေသောအခါက၎င်း၏ပါးစပ်နှင့်ငြိမ်သက်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ပါပဲ။ နှုတ်တော်ထွက်အဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကအိပ်တဲ့အခါမှာကုန်သွယ်ကိုရှောင်ကြဉ်လာသောအခါမှထုတ်ပြန်သောဒီအညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်မှုသုံးပြီးကုန်သည်ကြီးများ။
အဆိုပါမိကျောင်းညွှန်ပြချက်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်းအနှင့်အတူသုံးကွဲပြားခြားနားသော SMMA လျှောအပေါ်သို့အခြေခံသည်။
အဆိုပါမိကျောင်းရဲ့မေးရိုးပျှမ်းမျှ (SMMA) ရွေ့လျားတစ် 13 ကာလကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ ဤအဘားဂရပ်များ၏ပျမ်းမျှအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤသည် 8 ဘားဂရပ်များမှပြောင်းလဲနေသည်။
အဆိုပါမိကျောင်းအံသွား၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး 8 ကာလ SMMA ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်5ဘားဂရပ်များမှပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ အဆိုပါမိကျောင်းနှုတ်ခမ်းပျမ်းမျှအားစျေးနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး5ကာလ SMMA ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်3ဘားဂရပ်များမှပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။
အောက်တွင်မိကျောင်းအညွှန်းကိန်းဟာ ExpertOption ပလက်ဖောင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်သင်မည်သို့ဖေါ်ပြခြင်းပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြားကုန်သည်များရိုးရာရွေ့လျားပျမ်းမျှအားညွှန်းကိန်းကျော်မိကျောင်းညွှန်ပြချက်ပိုနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာမှားယွင်းသောအချက်ပြဖယ်ရှားပစ်ရန်ယင်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာ MA ညွှန်းကိန်းမကြာခဏမကြာခဏစောလွန်းသို့မဟုတ်သိပ်နောက်ကျတွင်သို့မဟုတ်အနေအထားထဲကရတဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့မှားယွင်းသောအချက်ပြမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါမိကျောင်းညွှန်ပြချက်ကျနော်တို့လာမယ့်အချိန်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ Ake တက် '' သံသရာကိုဖြတ်သွားတယ်။
အားလုံးသုံး SMMA လိုင်းများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြတ်ကူးအဖြစ်စျေးနှုန်းလိုင်းမှတစ်ဆင့်ဖြတ်တောက်ကြသောအခါဤသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤတွင်အဆိုပါစျေးကွက်နည်းနည်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဝင်ပြီးဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောလမ်းကြောင်းသစ်ရှိပါတယ်။
ဒါကအားလုံးသုံး SMMA လိုင်းများစျေးနှုန်းဇယားအောက်တွင်သို့မဟုတ်အထက် run တဲ့အခါမှာကစျေးကွက်ဝင်ဖို့အချိန်ရဲ့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကဇယားအထက်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်ဝယ်အောက်မှာ run နေလျှင်မူကား, ရောင်း။
အဆိုပါမိကျောင်းညွှန်ပြချက်ကုန်သည်များခေတ်ရေစီးကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာမဟုတ်ဘယ်မှာ guesswork ပပျောက်ကိုကူညီနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစဉ်အလာ, MA ညွှန်းကိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဆင့်မြင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေး tool တစ်ခုပါ။ သင်ဤလမ်းညွှန်မှာဆှေးနှေးအခြေခံနားလည်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်တို့လည်းစီးပွားဖြစ်ဒီအညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်သွယ်မှုလျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သင့်သည်။
Tags: expert option, expert option app ကို, expert option အပျငှေ, expert option ပေးချေမှု, expert option ရောဘတ်စက်ရုပ်, expert option ကုန်သွယ်, expert option ဆုတ်ခွာ, expert option ဆုတ်ခွာအထောက်အထား, ExpertOption ပလက်ဖောင်း, withdrawl expert option